कुनै दिन राष्ट्रपतिलाई बिरोध गरेको ठाउँमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह लाई फूलमाला, के देशमा राजालाई चाहेकै हुन त ? - सुदूरखबर डटकम
कुनै दिन राष्ट्रपतिलाई बिरोध गरेको ठाउँमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह लाई फूलमाला, के देशमा राजालाई चाहेकै हुन त ?
मधेसका शक्ति पिठको दर्शन र त्यहाँका जनतासँगको साक्षात्कारका लागि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह बुधबार जनकपुर पुगेका छन् ।उनी त्यहाँको सीतारमण होटलमा बास बसे । त्यसअघि उनको स्वागतका लागि मधेसका जनता पुष्पमालासहित लामो समय पर्खेर बसेका थिए । जब पुगे नारा लाग्यो– हाम्रो राजा हाम्रो देश प्राण भन्दा प्यारो छ !
यी तारन्तरका विभिन्न सभा, सम्मेलन र धार्मिक भ्रमणले मधेसको मनोविज्ञान कता लगिरहेको छ ? भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ ।पूर्वराजा शाहले केही दिन अन्य जिल्लामा पनि भ्रमण सकेर भारत जाने कार्यसूची बनाएका छन् । उनी विहीबार दिनभर सर्लाही र धनुषामा नै व्यस्त हुनेछन् । केही धार्मिक स्थलको भ्रमण र जनसंवादमा पनि उनको सहभागीता हुने शिव सेना नेपालका अध्यक्ष अनिल बस्नेतले बताए ।